Slackware, kumwe kwekuparadzira kwekare, kwatendeuka makore makumi maviri nemana | Linux Vakapindwa muropa
Slackware, kumwe kwekuparadzira kwekare kwazvo, yatendeuka makore makumi maviri nemana
Mumwedzi uno, kumwe kwekuparadzira kweGnu / Linux kwekare kwashandura makore, makore makumi maviri nemana kuti ave chaiwo. Slackware, kugovera kushoma kunozivikanwa nevashandisi "vadiki" venyika yeGnu / Linux, asi inozivikanwa kune mukuru muhondo ave nemakore kuva wekutanga uye unoshanda zvakanyanya kugovera uriko.
Vazhinji venyu muchafunga kuti Debian mukuru kune Slackware, asi chokwadi ndechekuti Debian akasvika kuruzhinji mukati memwedzi waGunyana 1993 apo Slackware yakasvika mukati memwedzi waJuly 1993. Mwedzi mishoma yemusiyano iyo kune vazhinji inogona kunge isingakoshe.
Slackware kugovera kwakaedza kupa chimiro chenharaunda dzeUnix asi nharaunda ine hushamwari yeGnu / Linux. Nekudaro, haina kungozivisa iyo Gnu / Linux desktop nharaunda asi zvakare yakaunza zvirongwa uye zvinoshandiswa zvaive zvakakosha kune vashandisi.
Iwo mapakeji ekutanga aive mune ino kugovera haana kutarisisa pakuve neazvino mavhidhiyo macodec asi pakupa mukana wekuva neimba server, kusanganisira maFTP maturusi, Webhu, tsamba seva, nezvimwe ... Kubva pane iyo vhezheni kusvika zvino shanduro dzinodarika gumi nemana dzaitika, yekupedzisira yavo yakavhurwa gore rapfuura, inozivikanwa Slackware 14.2. Uye, sekumwe kugoverwa, Slackware yanga ichigadzirisa shanduko uye mapuratifomu matsva senge 64-bit chikuva kana ARM, iyo yatove yakatsigirwa zvizere mushanduro yazvino yeSlackware.
Slackware yatove neshanduro yeAPM mapuratifomu
Kugoverwa kwaPatrick Volkerding yakagadziridzwa zvinoenderana nenyika yekuparadzirwa kweGnu / Linux, tinogona kutaura kuti parizvino, kunyange hazvo vhezheni yacho ichipfuura gore, kugoverwa kunogashirwa zvirikuenderera nekuwedzera shanduro dzazvino dzezvirongwa, vazhinji vachisimbisa kuti kugovera ine akawanda mapakeji uye akagarika kupfuura neshanduro 14.2.
Slackware haishandise madhiri mapakeji kana rpm mapakeji, kumisikidzwa kwemapakeji nyowani kana zvirongwa zvinoitwa kuburikidza nekumanikidza tar mafaera, sisitimu iyo yakwanisa kukunda kwemakore iine kumwe kugoverwa kuchigamuchira. Izvi zvinotibvumidza isu kuisa chero chirongwa, tingave kana tisina ma software maneja, kunyangwe tichifanira kuziva kuti Slackware inoshandisa zvakare repository system.
Slackware inowanikwa kuburikidza yayo yepamutemo webhusaiti, zvakadaro zvinofanirwa kuyeukwa kuti haisi kugovera kwakanangidzirwa kune vashandisi veavice, inoda rumwe ruzivo kuti uiise uye uishandise pakombuta. Chero zvazvingaitika, ichi hachisi chipingamupinyi kuti kugoverwa kurambe kuri vapenyu uye kushandiswa nevazhinji. Uye ini ndinovimba kuti zvirinani kuti kugovera kunogara kuri mupenyu pandinosvika makore makumi mashanu. Makorokoto Slackware !!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Slackware, kumwe kwekuparadzira kwekare kwazvo, yatendeuka makore makumi maviri nemana
Makore makumi maviri nemana apfuura? buffff sezvo nguva inopfuura .. yaive yangu yekutanga linux ... mushure mekupfuura kuburikidza neSCO Unix, uye Xenix ..
Nvidia inogadziridza mifananidzo yayo yeLinux
Deepin 15.4.1, yekutanga yekuchengetedza vhezheni ye Deepin 15.04